I-Asphalt Mixing Plant Factory, abaThengi be | I-China Asphalt yokuXuba abavelisi bezityalo
Ukurhwaphiliza okutyhutyha iselfowuni
I-AMP enobubele e-Eco-CLH
Uhlobo olupheleleyo lwe-AMP ...
CL uthotho uhlobo oluqhelekileyo Asphalt Ukuxuba isityalo CL uthotho uhlobo oluqhelekileyo lokuxuba isityalo, luhlobo oluqhelekileyo lweCa-long asphalt yokuxuba isityalo, yinxalenye esemgangathweni yolunye uthotho lwesityalo, iimpawu zayo zobuchwephesha ziimpawu eziqhelekileyo zolunye uthotho lwesityalo. I-Beijing Ca-Long ibambelela kubizo lobungcali, imveliso esemgangathweni, iinkonzo ezichanekileyo, iimodeli ezahlukeneyo zeemfuno zabathengi ezahlukeneyo. ICa-Long iphumelele eyona modeli inkulu yezityalo, ekhokelela ...
Uhlobo lweContainer epheleleyo ye-AMP-CLJ
I-CLJ uthotho olupheleleyo lwesikhongozeli seTela yokuXuba iZityalo ezigcweleyo zohlobo lweTela yokuTyala, edityaniswe ngokudibeneyo yinkampani yethu kunye neYunivesithi yaseChangAn, isisombululo esikhethekileyo kwingxaki yebhotile yexabiso lokuhambisa eliphezulu ngenxa yomthamo omkhulu wezityalo. Isityalo samkela uhlobo lohlobo lwesikhongozeli, zonke iiyunithi kunye nezinto ezihlanganisiweyo zenziwe kwizikhongozeli ezisemgangathweni, zenza iiyunithi zeekhonteyina ezininzi, ezinokufakwa ngokukhululekileyo kwezinye izikhongozeli zokuhambisa, ziqonde ukuhanjiswa okuphantsi ...
Utyando lweRAP - CLR
Ukuzenzela ngokwakho ngu-Beijing Ca-Long, CLR uthotho olwenziwe ngokutsha lwe-Asphalt Plant (RAP) inokusebenzisa i-asphalt eshushu ehlaziyiweyo ukuvelisa i-asphalt entsha ngepesenti enkulu. Ngama-60%. Uyilo lwayo luzisa iteknoloji yamanye amazwe kwaye ithathela ingqalelo iimeko zangoku zaseTshayina. Ukusebenza kwayo kufikelela kumgangatho ophambili wamanye amazwe. Iimpawu eziphambili ■ Uyilo loyilo olwahlukeneyo, lunokudityaniswa ngokugqibeleleyo kunye neendidi ezahlukeneyo zezityalo zokuxuba izinto ezingafunekiyo.
Isixhobo esimanyeneyo seRAP-CLUR
Uluhlu lwe-CLUR RAP oluhlanganisiweyo lwe-RAP oluhlanganisiweyo lweZityalo luyilelwe ngobuchule ngokwesiseko sokufunxa itekhnoloji yaseYurophu ehambele phambili kwaye ngokwenyani yase China. Yayilwa yaphandwa ngo-2010 yaza yangena kwintengiso ngo-2012, ngeyona teknoloji iphambili e-China ■ Inkqubo emanyanisiweyo yoyilo, ulwakhiwo oludibeneyo. Ngokutsho kweempawu zempahla eluhlaza kunye nezinto ezirisayikilishwe, ulwakhiwo olutsha kunye nenkqubo yoyilo isusa iziphene zokuvuselelwa kwemveli ...
I-CLH series Eco-friendly Asphalt Mixing plant Eco-friendly Asphalt Mixing plant, iminyaka emine yophando olunzima kunye nophuhliso, inqanaba eliphambili lamazwe aphesheya, ukufezekisa ucoceko, ukuthula, ukurisayikilisha, uqoqosho. "Luhlaza, ukujikeleza, ukusebenza ngokukuko" ngumbono wokhuselo lokusingqongileyo kweCa-Long, ngokwemigangatho ephezulu yeemfuno zokhuselo lokusingqongileyo, uCa-Long wamkela itekhnoloji ephezulu kunye namanyathelo okondla, ukukhupha, ukomisa, ukuhlolwa kunye nokulinganisa, i-op .. .
CLY uthotho Mobile Asphalt Ukuxuba Isityalo Ca-elide Mobile Asphalt Ukuxuba Isityalo sisizukulwana esitsha iimveliso uthotho mobile ngokuzimeleyo ziphuhliswe Ca-Long, ezinokuthi zikwazi ukuqonda ukufuduselwa izityalo mobile kunye nofakelo oluzimeleyo, kwaye ukuziqhelanisa neemeko zokusebenza imeko yokufuduka rhoqo, ngokukhawuleza ukufakwa kunye nokukhutshwa ngokukhawuleza kwindawo. Ingakumbi kwimarike yaphesheya kunye nokulungiswa okuncinci kwekhaya, imarike yolondolozo. ■ Yamkela uyilo olumanyanisiweyo, ulungelelwaniso lwendibaniselwano. I ...